'The Empty Man' ndeye Inhema Inotyisa Horror Firimu
musha	Horror Varaidzo Nhau	'The Empty Man' ndeye Inhema Inotyisa Horror Firimu
by Waylon Jordan July 18, 2021 5,588 maonero
David pamberi Murume Asina Chinhu yakatora zvishoma nezvishoma internet buzz, kwete kusiyana neiyo firimu titular villain. Rimwe zuva, ndakanga ndisingazivi kuti chii. Inotevera, ndakatanga kuona zvataurwa pano neapo. Zvino? Zviri kwese kwese.
Imwe yemafirimu ekupedzisira akagadzirwa naFox isati yatengwa naDisney, Murume Asina Chinhu yakavakirwa pane yakajeka graphic naCullen Bunn uye nyeredzi James Badge Dale saJames Lasombra, aimbova mupurisa anotora mukutsvaga mwanasikana wemuvakidzani wake asipo. Kutsvaga kwake kunomupinza mukati mekereke isinganzwisisike nechinangwa chekudaidza chinoshamisa chinonzwika senge ngano yemudhorobha yakati yakafemerwa The Ring uye mafirimu akafanana pakutanga.
“Husiku hwekutanga munomunzwa. Husiku hwechipiri iwe unomuona. Husiku hwechitatu anokuwana, ”vanodaro, vachimisikidza mutsara wenguva weiyo firimu uye protagonist yayo apo iye achiswedera padyo nechokwadi.
Dale anotungamira ane tarenda akakanda mukati Murume Asina Chinhu, kusanganisira Marin Ireland (The Umbrella Academy, Sasha Frolova (Red Sparrow, Robert Aramayo (Nocturnal Mhuka, Ron Canada (Tsvina Yemunhu), uye Stephen Root (Office Space), asi iyo firimu inorarama uye inofa nekuita kwake. Neraki, mutambi ane tarenda rekubvisa izvo.
Lasombra wake ndiye munhu wese watinoda kuti tifambe mumamiriro ezvinhu ane ngozi zvakanyanya uye anotityisa isu sevaoni. Iye akangwara, ane shungu, uye anokanganisa munzira dzese dzakarurama. Tinonzwa kushungurudzika kwake, kuda kwake, uye pakupedzisira kutsamwa kwake uye kutya.
Chandaida zvakanyanya pamusoro peiyi firimu chakasungirirwa zvisingaite kunyaya hombe yefirimu kwandiri. Iyi yakanaka inononoka-kupisa bhaisikopo iyo inotora nguva yayo kuvaka kusagadzikana uye mamiriro. Asati aenda uye mutambi wake achisimbisa kakawanda kuti hazvisi izvo chete zvaunoona, asi izvo zvausingakwanise, zvinogona kukukuvadza. Vanozviita zvinobudirira zvekuti kunyangwe zvinhu zvidiki zvinogona kugumburisa muoni, uye kana zvikakura, zvakawanda mu-kumeso kwako zvinotyisa zvikaitika, vanozoisa moyo wako kumhanya.
Uyezve, ivo vanozendamira mune inotyisa chitendero trope munzira dzakarurama chete. Pfungwa yeboka revanhu vanoita zvisirizvo ndeye yakamboshandiswa nekushungurudzwa mukutyisa, saka zvinofadza kuona firimu ichitora trope kuti chii uye kuitisa nefeesse kuvaka paranoia mune yayo protagonist uye mune yayo vateereri.
Ndiani waunogona kuvimba naye chaizvo muhupenyu hwako? Ndiani waunonyatsoziva? Zvinotonyanya kukosha, chii iwe unonyatso kuziva nezvako uye nevanhu vakakukomberedza uine chokwadi?
James Badge Dale anopa zvisingaite mashandiro muMurume Asina Chinhu
Murume Asina Chinhu anotora pfungwa idzi kakawanda, achivashatirisa uye achisimbisa kusanzwisisika kwevateereri vemufirimu uku achishandisa hunyanzvi zvinyorwa zvekuvaka zvekuvaka zvaJacques Derrida pamwe nezvinotarisirwa neNietzsche. Tinogona kuchera mberi mune izvi misoro - ndine zvakawanda zvekutaura nezve zita rekuti Pontifex Boka naJames Lasombra - asi mukuita kudaro, tinosvika padhuze nekuwira njodzi imwechete iyo inotyisidzira kukwira firimu.
Sezvose, Murume Asina Chinhu rakakora zvekuti pakupedzisira rinomhanya rakanyanya kureba. Sevaongorori isu tinowanzo shoropodzwa nekuda kwekutaura nezvekufamba uye kugadzirisa nyaya pasina kupa mienzaniso yakasimba. Neraki, handizvo pano.
Pane chikamu chakazara pakutanga kwefirimu icho chinobata nepfungwa yeMurume Asina chinhu mune imwe nyika nerimwe boka revanhu. Isu tinowana yakazara nyaya mukati maminetsi gumi neshanu kusvika makumi maviri ayo anongotariswa tangentially gare gare mufirimu. Ichi chidimbu chese chingadai chakatemwa, kuchekerera iyo firimu nguva yekumhanyisa pasi pasi peiyo maviri maawa mucherechedzo, uye kugadzira yakasimba, yakatarisa nyaya.
Neraki, kunyangwe iyi nhanho isingakanganise izvo zviri pachena kuti iri firimu hombe rine kutyisa kuri pamutemo uye mhedzisiro isinganetsi zvechokwadi munzira dzese dzakanakisa. Murume Asina Chinhu irikudirana parizvino HBO Max uye inowanikwa kuroja pane mamwe mapuratifomu edhijitari.